स्तनको क्यान्सरको उपचार गर्न Nolvadex को अन्तिम गाइड
Nolvadex को बारे सबै केहि
1 के Nolvadex के छ? यस्ले कसरी काम गर्छ? 2। नोल्वाडेक्स प्रयोग गर्दछ
3.Nolvadex खुराक 4.Nolvadex परिणामहरू
5.Nolvadex आधा-जीवन 6.Nolvadex पक्ष-प्रभाव
7.Nolvadex फाइदाहरू 8.Nolvadex समीक्षाहरू
9.Nolvadex को लागि बिक्री 10.Nolvadex महिलाहरु मा बांझपन को उपचार को लागि
1. Nolvadex के हो? यस्ले कसरी काम गर्छ?
यस समय, स्तन क्यान्सर सबैभन्दा बढि रोगहरु मध्ये एक महिला हो जुन महिलाहरु बाट ग्रस्त हुन्छन्। धेरै अनुसन्धानहरू गरिसकेका छन् र अझै पनि ड्रग्समा गरिरहेको छ जुन एक क्यान्सर-फ्रि-जीवनको जीवनमा बाँच्न मदत गर्न सक्छ। Nolvadex (54965-24-1) एक उपचार हो कि स्तन र क्यान्सर को उपचार को उपचार मा फायदेमंद साबित भएको छ। यसको तुलनामा यसको किफायतीले यो विश्व स्तरमा एक स्थान कमाउँछ।
नोल्भाडेक्स (54965-24-1) एक मौखिक गोली हो कि रोगियों को उपचार मा प्रभावशाली रहेको छ जसले कैंसर को चरण मा उन्नत गरेको छ। यो 1966 मा खोजिएको थियो, र 1970 मा एक क्यान्सर उपचार औषधि को रूप मा यसको अध्ययन। 1998 मा, पहिलो एफडीए स्तनपान क्यान्सर रोक्न मद्दतको लागि एफडीएलाई स्वीकृति दिईयो। अनुसन्धानले देखाएको छ कि नोल्भडेक्सले महिलाहरु को लागि स्तनपान क्यान्सर देखि पीडा को संभावना को कम गर्यो, जसको लागि यो विकास को उच्च जोखिम थियो।
Nolvadex कसरी काम गर्दछ भन्ने बुझ्न, तपाईंले जान्नु पर्छ कि छातीको क्यान्सरका कोशिकाहरु बढ्न र बढ्नको लागि एस्ट्रोजेनको रूपमा चिनिने महिला हार्मोन चाहिन्छ। यसैले टोमोक्सिफन यो स्तन कैंसरको कोशिकाहरुमा एस्ट्र्रोजन रिसेप्टरहरुमा बाध्यता मा एस्ट्रोजन संग प्रतिस्पर्धा गरेर यो रोक्न सक्षम छ।
नोल्वाडेक्स (54965-24-1) लाई औपचारिक रूपमा चयनशील एस्ट्रोजन रिसेप्टर मोड्युलेटर (SERM) भनिन्छ। यसैले, स्तन मा एस्ट्रोजेन रोक्न स्तन कैंसर कोशिकाहरु को वृद्धि र पुन: प्रजनन को कम गर्दछ।
स्तन कैंसरको कोशिकाहरूमा नोल्भडेक्सको लडाइँ एस्ट्रोजेन भन्दा अन्य, यो पनि सकारात्मक प्रभावहरूको प्रतिरूप गर्दछ जुन एस्ट्रोजेनले शरीरको तवरमा खतरा उत्पन्न गर्दछ। हर्मोन प्रतिस्थापन थेरेपीबाट जोगिन नसक्ने पोष्टमेनपोस्सील महिलाहरूको लागि पोष्टोक्सिफेन महिलाहरूको लागि, यो हृदय रोगको साथ साथै अस्टियोपोरोसिस (एक हालत जुन हड्डियों को बर्बाद गर्न को लागी लाग्दछ) को कारण हुन सक्छ।
2. नोल्वाडेक्स प्रयोग गर्दछ
Nolvadex उमेर देखि पछि उमेर को विभिन्न स्थितियों को उपचार मा प्रयोग भएको छ। यो पुरुषहरु र महिलाहरु को अधिकांश भन्दा कम उमेर मा आफ्नो जीवनकाल मा त्यहि बीमारीहरु संग पीछा एक उद्धारकर्ता को रूप मा आउछ। यहाँ केहि छन् नोल्वाडेक्स प्रयोग गर्दछ यसले यो खडा गरेको छ;
नोल्वाडेक्समेय दुवै पुरुष र महिलाहरु लाई लिम्फ नोड को उपचार को रूप मा सकारात्मक या लिम्फ नोड-नकारात्मक स्तन क्यान्सर को उपचार को रूप मा उनको सफल सर्जरी भएको छ। नोल्भ्याडेक्स प्रयोगले अधिक लाभकारी साबित गरेको छ जब क्यान्सरसँग सम्बन्धित व्यवहारमा सकारात्मक एस्ट्रोजन र प्रोजेस्टरोन रिसेप्टरहरू छन्। नोल्वाडेक्स विपरीत छातीको स्थानान्तरित कैंसरको खतरा कम गर्दछ।
पुरुषहरु र महिलाहरु जो मेटास्टेटिक स्तन स्तन कैंसर (फैलिएको छ कि क्यान्सर) लाई नोल्वाडेक्स संग निर्धारित हुन सक्छ।
महिलाहरु जो सटिवा मा डुबनिक कार्सिनोमा देखि पीडित महिलाहरु (डीसीआईएस) र जो पहिले देखि नै सर्जरी र विकिरण उपचार हो, यस औषध देखि पनि लाभ उठाउन सक्छ। यस अवस्थामा, आलोचक स्तन क्यान्सरबाट पीडितको जोखिम घटाउछ। तथापि यो उपचार गर्नुको जोखिम र लाभ पहिले नै छलफल गर्न सकिन्छ।
महिलाहरु लाई स्तनपान को क्यान्सर को विकास को उच्च जोखिम मा पनि यसलाई होने को संभावना को सामना गर्न को लागी औषधि संग निर्धारित हुन सक्छ। यस उपचार गर्नुको जोखिम र फायदाहरु, यस मामला मा छलफल गरिनै पर्छ।
एक असामान्य नोल्वाडेक्स को एक डिब्बा कैंसर को उपचार को उपयोग गर्दछ।
3. Nolvadex खुराक
Nolvadex खुराक यो काम गर्न धेरै उच्च हुनु हुँदैन; यो एक शक्तिशाली SERM छ जुन राम्रो खुराकमा राम्रो काम गर्दछ। चिकित्सा उपचारको लागि, सामान्य Nolvadex खुराक 10-20mg हो, जुन दैनिक दुई पटक प्रशासित हुन्छ।
एस्ट्रोजेनिकिक र प्रो-टेस्टोस्टेरोन इफेक्टका लागि, नोल्भडेक्स डोजेजको अनुसार 10-40mg प्रति दिन हुनुपर्छ। तपाईंले रोज्नु भएको खुट्टा तपाईको साइज, लक्ष्मी, र तपाईं यसमा हुनु पर्ने समयको आधारमा निर्भर गर्दछ।
यो ध्यान दिनु राम्रो हो कि उच्च नोलभ्याडेक्स डोजेजले अझ बढी सकारात्मक प्रभावको अर्थ गर्दैन। 10-40 मिलीग्राम तपाईंलाई एनाबिक स्टेरियोडहरूको हानिकारक असरहरू कम गर्न आवश्यक महत्त्वपूर्ण र छिटो प्रभाव प्रदान गर्नेछ।
Nolvadex प्रशासनको सन्दर्भमा कुनै विशेष विचारहरू लिईएको छैन। यो तपाईंको अघि यो लिनु अघि, पछि, वा भोजनको लागि हो। तपाईं यो पनि मा बिहान वा रातिको समयमा हुन सक्छ। कहिलेकाहीं यो सल्लाह दिइएको छ कि तपाईंले नोलभ्याडेक्स डोजेज विभाजित गर्नु हुँदैन।
4. नोलभ्याडक्स परिणामहरू
नोलभ्याडक्सको क्यान्सरको रोकथाममा परिणामहरू अन्य क्यान्सर ड्रग्सको तुलनामा सबैभन्दा राम्रो हो। परिणामहरूले महिलाहरूमा 50% कमी देखाउँछ जुन दुर्व्यवहार र गैर-आक्रामक स्तन क्यान्सरको लागि उपचार गरिएको छ। पाँच देखि दस वर्षको अवधिमा एउटै स्तन क्यान्सरको पुन: पुर्जी र अन्य स्तन पनि संक्रमित संक्रमणको खतरा कम गर्न साबित भएको छ।
नोल्वाडेक्सले यसलाई गर्न्कोमास्टियाको उपचारमा दुर्व्यवसायिक औषधिको रूपमा उत्कृष्ट समाधानको रूपमा पनि बनाउनुपर्दछ र प्रारम्भिक विकासको प्रारम्भिक उपचारको रूपमा पनि गर्दछ। एक महिनामा दस जना रोगीहरूमा एक अनियमित अध्ययन भएकोमा, सातले तिनीहरूका छातीको आकारमा कमीको अनुभव गरे। पीडित स्त्रीको पीडाबाट पीडित चारजनाले केही राहत पाए। त्यहाँ विषाक्तता रिपोर्ट गरिएको थिएन।
यो टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को उत्तेजना मा उत्कृष्ट परिणाम पनि प्रस्तुत गर्दछ किनकि यो चार हप्ता पछि सामान्य हुन को लागी रिपोर्ट गरिएको छ।
5. नोल्वाडेक्स आधा-जीवन
यो नोल्वाडेक्स आधा-जीवन अन्य मौखिक यौगिकहरूको तुलनामा असाधारण लामो हुन्छ। यो लगभग5देखि सात दिन केहि अध्ययनहरु संग केहि छ कि यो थाहा छ कि नोल्दाडेक्स आधा जीवन लामो दिन चौथो दिन सम्म पुग्न सक्छ।
6. नोल्वाडेक्स साइड-प्रभाव
नोल्वाडेक्स एक औषधि हो जुन पचास वर्ष भन्दा पहिले नै पेश गरिएको थियो, र कुनै आश्चर्य नगर्ने हरेक बिजुलीको अध्ययनलाई उचित रूपमा अध्ययन गरिएको छ। यसले धेरै फाइदाहरू पाएको छ, तर त्यहाँ पनि छन् नोल्वाडेक्स साइड इफेक्ट यसले तपाईंलाई सताउन सक्छ। तथापि, यो मतलब छैन कि एक पल्ट जब तपाइँ यसलाई लिनु भएको छ, तपाईंलाई Nolvadex साइड इफेक्टहरू गुजरना हुनेछ। अधिकांश समय, तपाईं कहिल्यै पनि तिनीहरूबाट पनि पीडित हुन सक्नुहुन्न।
अक्सर, नोलवाडक्स साइड इफेक्ट आफ्नो शुरुआत को लागी भविष्यवाणी योग्य छ र तपाईं तिनीहरूलाई कत्ति लामो हुनेछ। यो पनि उल्लेखनीय छ कि साइड इफेक्टहरू सधै उल्टाउन सकिने हुन्छ र तपाईले उपचारको साथ एक चोटि एकचोटि जान सक्नुहुन्छ।
एकपटक तपाईंले आफ्नो शरीर सुन्नु भएपछि, तपाईंले केहि परिवर्तनहरू गरेर साइड इफेक्टहरू गम्भीर हुन सक्छ भनेर सिक्न सक्नुहुनेछ, र तपाईंले तिनीहरूलाई कम गर्न वा रोक्न सक्नुहुनेछ। केहि सामान्य साइड इफेक्ट समावेश गर्दछ;
लाइब्रेड कम भयो
कोही पनि बिस्तरमा खराब प्रदर्शन गर्न चाहँदैनन्, विशेष गरी यदि तपाईं यो गरिरहनुभएको छ। यद्यपि नोल्भ्याडक्स फायदामध्ये एक भनेको यो टेस्टोस्टेरोन तह बढाउनु हो, यो पनि एक सेक्स ड्राइव कम गर्न सक्षम छ। अध्ययनले देखाएको छ कि केहि नोल्द्याक्स प्रयोगकर्ताहरूले निम्न लिग्डोको गुनासो गरे, जबकि अरूको लागि यो गैर-अवस्थित हुन्छ।
कपाल हटाउने एक दुखाइ हुन सक्छ। दुर्भाग्यवश, यो Nolvadex को प्रयोग संग नियमित घटना हो।
हात, टाँस्ने, र खुट्टामा सुन्नु
यहाँ Nolvadex साइड इफेक्टहरू छन् जुन तत्काल चिकित्सा ध्यान चाहिन्छ;
तपाईंको दृष्टिमा परिवर्तन
उदास लगाउँदा (सामान्यतया तपाईँको दैनिक गतिविधिहरू संचालन गर्न सक्षम छैन)
नली (निर्धारित औषधि लिनु पछि समेत खाने र रिभाइभ गर्ने असक्षमता)
रक्तचाप, दुखाइ र मासिक धर्म अनियमितताको साथ अत्यधिक योनि निर्वहन
नयाँ स्तन लम्प्स।
एक खुट्टा वा हतियारमा सुँगुर, दुखाइ, वा लालोपन र अर्को होइन
7. Nolvadex फाइदाहरू
धेरै मानिसहरू जिनेकोमास्टिया वा म्यान स्तनहरू गम्भीर अवस्थाको रूपमा देख्दैनन्, तर वास्तविक अर्थमा यो हो। यो पुरुष मा छाती ऊतक को विकास हो। सामान्यतया, यो उमेरको वा स्टेरिरोडहरूको कारक जस्तै कारकहरूको कारणले एक हार्मोनमा परिवर्तन भएको हुन्छ।
यस अवस्थामा, एस्ट्रोजन / टेस्टोस्टेरोन अनुपातमा वृद्धि बढ्दो कारण हुन सक्छ। साथै, एस्ट्रोजन वा एरेजन रिसेप्टर अन्तर्क्रियाको माध्यमले वृद्धि भएको एस्ट्रोजनिक वा कम एन्ड्रोजनिक उत्तेजना कारण हुन सक्छ।
यसबाट पीडित पुरुषहरूले उनीहरूको भौतिक उपस्थितिमा परिवर्तनहरू मात्र देख्दैनन्, तर यसले उनीहरूको मनोवैज्ञानिक हानि पनि सक्छ। आफ्नो विश्वास गुमाउनु भन्दा अन्य, यो आफैले अलग गर्न चाहने बिन्दुमा निराश बनाउन सक्छ। अझ पनि खराब, यो एक ठूलो परिमार्जित शर्टको लागि जाँदा तिनीहरूलाई लुकाउने प्रयास र आफ्नो शरीर बेवास्ता गर्न सक्ने क्रियाकलापबाट बच्न कठिन बनाउन सक्छ, अर्थात्, तैराकी।
आजकल, यो अवस्थाको साथ धेरै मानिसहरू सधैं स्थायी समाधानको खोजीमा छन्। राम्रो कुरा हो, एक छ Nolvadex फाइदाहरू के यो एक गुप्त दुष्प्रभाव बिना बिना oversized स्तन कम गर्दछ। यसैले Nolvadex, केहि gynecomastia मामलाहरु को उपचार मा एक सुरक्षित र प्रभावकारी विकल्प प्रदान गर्दछ।
मांसपेशिहरु लाई बढाउनुहोस्
मांसपेशी जन प्राप्त गर्ने प्रक्रिया यति जटिल छैन। सबैलाई तपाईले सोध्नुभएको छ वजन लिनु, सही आहारमा रहनुहोस्, र उत्कृष्ट सौर्य बस्तुको पूरक लिनुहोस्। तपाईंले प्लेटाउमा हिड्नु भयो भने के तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? यदि तपाईं यसलाई हटाउन चाहानुहुन्छ भने कुन उत्पादन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईं कसरी आफ्नो मांसपेशियों को विकास को बढावा दिनुहुन्छ?
तथ्य यो हो कि नोल्वाडेक्स को उपयोग को एक शरीर मा टेस्टोस्टेरोन को बढाने वाला छ यो यसलाई एक सही विकल्प दि्छ यदि तपाईं आफ्नो मांसपेशियों मा ठूलो मात्रा मा वृद्धि गर्न चाहते हो। यो मस्तिष्क मा हाइपोथोमस र पिट्यूट ग्रंथि को कार्य मार्फत गर्दछ। यसले अनुकली उत्तेजक हार्मोन (FSH) को उत्पादन मा वृद्धि को साथ साथै ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन (एलएच), जो तब टेस्टोस्टेरोन को टेस्टोस्टेरोन को उत्पादन को बढावा गर्दछ।
तथ्याङ्क, यदि एक व्यक्तिले दस दिनको लागि 20mg नोल्वाडेक्स लिन्छ भने, उनीहरूको रगतमा टेस्टोस्टेरोन स्तरले 41% द्वारा बढ्न सक्छ। यदि छ हप्ताको लागि प्रयोग गरिन्छ भने, टेस्टोस्टेरोन स्तर उच्च 84% को रूपमा उच्च हुन सक्छ।
टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन हो जसको उत्पादन स्वाभाविक रूपमा शरीरमा हुन्छ। यसले अन्य भूमिकाहरू बीच मांसपेशी प्रोटीनको संश्लेषण सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। विभिन्न कारकले टेस्टोस्टेरोन उत्पादनमा बाधा पुऱ्याउन सक्छ। यो काउन्टर गर्न, तपाईंले टेस्टोस्टेरोनको उत्पादन बढाउन नोल्भडेक्स प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
पोस्ट चक्र थेरेपी
नोल्वाडेक्स गैर-स्टेरॉयडल SERMs मध्ये एक हो, यसैले एस्ट्रोजेनिकिक एन्कोडेसिक र शरीरमा एस्ट्रोजेनिक एग्रोनवादी प्रभावहरू पनि प्रदर्शन गर्दछ। यसको अर्थ केही क्षेत्रहरूमा, यसले एस्ट्रोजेनिक प्रभावको सामना गर्न सक्छ, जबकि केहिमा, यो एन्टिस्ट्रोजेनिक प्रभावहरूको नेतृत्व गर्न सक्छ। यस्तो प्रभाव को एक टेस्टोस्टेरोन को उत्पादन मा वृद्धि हो। यसले शरीरमा एस्ट्रोजनको प्रभाव पनि कम गर्छ।
यो कारणले गर्दा नोल्भडेक्सलाई आवश्यक अवयव मानिन्छ जब कसैले पोस्ट चक्र उपचार गर्न चाहन्छ। यो कारणले गर्दा एनाबोलिक्स स्टेरियोड्स चक्र चलाउन पछि, तिनीहरूले यसलाई एस्ट्र्रोजनमा बदल्न सक्थे। नतिजाको रूपमा, कसैले म्यान स्तन प्राप्त गर्न सक्दछ, जसको मतलब तपाईको लाभहरू बर्बाद गर्न जान्छ। एस्ट्रोजन को रोकथाम गरेर, यस्तो साइड इफेक्ट बे मा राखिएको छ। नोल्वाडेक्स प्रयोगको परिणामको रूपमा टेस्टोस्टेरोन तह सामान्यतया सामान्यमा फर्किने सम्भावना छ।
सामान्यतया, नोलोभ्याडक्स तत्काल प्रशासित हुन्छ जब सबै एनाबिक स्टेरियोड्स व्यक्तिको शरीरबाट हटाइएको छ। कसैले चार देखि6हप्ताको लागि 20-40mg लिनुपर्छ। यसको तुलनामा कुनै पनि रकम अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव प्रस्ताव गर्दैन।
PCT को समयमा, नोल्ल्डेडक्स कम्तिमा एक वा दुई टेस्टोस्टेरोन उत्तेजना यौगिकहरू जस्तै एचसीजी वा एरोसास जस्तै aromatase अवरोधक संग एक साथ व्यवस्थापन गरिन्छ। तिनीहरूलाई एकसाथ प्रयोग गर्ने फायदा प्रभावहरू बढावा दिन र HPTA प्रकार्यलाई बढावा दिनका लागि हो।
यदि तपाइँले टेस्टोस्टेरोन दमनको सामना गर्नुको उद्देश्यमा एक चक्रको समयमा नोलभ्याडक्सको प्रयोग गर्नु पर्दछ भने तथ्याङ्कलाई रोक्न सक्दछ किनभने यसले प्रायः काम गर्ने काम गर्दैन। यसको मतलब हुन सक्छ कि तपाईंको पैसा नाली तल जानेछ।
केही वर्ष अघि, वजन हराउँदा अब राम्रो लगाउन टिकटहरूको रूपमा मानिन्छ। गर्दन बदल्न भन्दा कम, वजन गुमाउन सक्छ कि तपाईं स्वस्थ हुन चाहानु सक्छ। अतिरिक्त क्यालोरी बहाली, तथापि, एक सजिलो काम होइन। तपाईं आफ्नो वजन घटाने यात्रा मा सफल हुन सक्छ कि एक तरिका Nolvadex को प्रयोग मार्फत छ।
अध्ययनमा सकियो नोलभ्याडक्स परिणामहरू वजन घटाने मा देख्यो कि यो यसको गुणहरु लाई अधिक वजन प्रबंधन संग योगदान को प्रभावी संग प्रभावी छ। सामान्यतया, नोल्वाडेक्सले सिद्ध चयापचय गरेको छ कि शरीरमा अधिक चर्को जलाउनको लागि जब चयापचय किक हुन्छ। यो एक सुधारिएको लिपोलाइटिक प्रकार्यको कारणले गर्दा चर्को जलाउने बढि बढ्छ।
क्लेनबर्टोलसँग एकसाथ, उनीहरूले लिपोप्रोटिन लिपि गतिविधिमा कमी ल्याउन सक्थे जुन ट्रिग्लीसाइडको चयापचयमा एक आवश्यक एंजाइम हो। त्यसकारण, दुवैले वजन घटाने औषधिको रूपमा कार्य गर्न सक्दछ। यसबाहेक, Nolvadex को शरीर को बोसो जलाने को क्षमता मा वृद्धि को रूप मा जान्छ र वसा जलने को प्रक्रिया मा आवश्यक ऊर्जा स्तर को बढावा गर्दछ।
यसले प्रतिरक्षा प्रणाली प्रकार्यलाई बलियो बनाउँछ
जब हामी शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीको कुरा गर्छौं, हामी संक्रमण र बिरामीहरूको विरुद्ध लड्ने क्षमताको सन्दर्भमा उल्लेख गर्दै छौं। धेरैलाई अज्ञात, नोल्भडेक्सले एक प्रतिरक्षा प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
8. Nolvadex समीक्षाहरू
अलेक्जेन्ड्रा एम भन्छन्, "मैले पछिल्लो छ महिनाको लागि काम गरिरहेको छु, र शरीर परिवर्तनहरू मैले अपेक्षा गरेको जस्तो थिएनन्। मैले केहि माछा खोजेँ जुन मेरो मांसपेशी जनलाई बढावा दिन र नोलभ्याक्सको लागि बसेको थियो। Nolvadex नतिजाहरू मात्र उत्कृष्ट छन्। मेरो मांसपेशिहरु मा ठूलो मात्रा मा हास्यास्पद वृद्धि भएको छ, र मलाई लाग््छ कि यो उत्पादन को लागि धन्यवाद को लागी चाहिए। म यसलाई कुनै पनि व्यक्ति ठूलो मांसपेशीहरू हेर्दै हेर्छु। "
उत्तम वजन घटाने औषधि
प्रिस्किला के भन्छन्, "धेरै अनुसन्धान पछि, मैले थाहा पाएँ कि एक नोल्डेक्स फाइदाहरू मध्ये एक वजन घटाने हो। म यो प्रयास गर्न पर्खन सकेन, र तुरुन्त मैले यो यहाँ आदेश दिएँ; मैले एक दिन मेरो प्याकेज पाएको थिएँ। अहिले सम्म मैले दस किलोग्राम हराएको छु, र म यो खुशी कहिल्यै भइरहेको छैन। यो अब मेरो जाँदा वजन घटाने औषधी हुन सक्छ, र मेरा साथी र परिवारले पनि यो प्रयास गर्न चाहान्छ। मैले अहिलेसम्म कुनै पनि नोल्डडेक्स साइड इफेक्टबाट पीडित गरेको छैन, यसको विपरीत मैले के गरिरहेको बेला अन्य वजन घटाने औषधीहरू प्रयोग गर्दा। यदि तपाईं आफ्नो मस्तिष्क र हृदयको पीडा बिना केही जन बहाउन चाहानुहुन्छ भने नोलभ्याडक्स तपाईंले के गर्नु पर्छ। "
यो चमत्कार हो
लिला व्यानरनले यसो भने, "मैले भर्खरै मेरो नोल्वाडेक्स चमत्कार पाएका थिए। कस्तो चमत्कार यो सोच हुन सक्छ? पछिल्लो दस वर्षको लागी बिना भाग्य को कल्पना गर्न को लागी, मैले अंततः नेल्वाडेक्स को मदद संग सकारात्मक जांच गरे, र म अहिले मेरो बन्डल आनन्द लिइरहेछु। मलाई यकीन छैन कि म यो शब्दमा लाग्न सक्दिन, र मलाई खुशी छ कि मैले अन्त गरे। म अझै पनि कष्टमा छु, र मैले भर्खरै मेरो बच्चालाई चमत्कार गरे। कुनै व्यक्ति जो गर्भ गर्न प्रयास गरिन को लागी नोल्भडेक्स लाई एक प्रयास दिनुहोस। "
सर्वश्रेष्ठ पीसीटी ड्रग
क्यासी ह्यूस्टन भन्छन्, "मैले यो उत्पादनलाई मेरो पतिको आदेश दिएँ किनभने स्टेरॉयड प्रयोगको कारण उनले छातीहरू विकास गर्न थाले। यसले तिनलाई धेरै असर पारेको छ कि उहाँले शोकको कारणले पनि बिरामी छोड्नु भयो। तिनको लिबिया कम थियो, पनि, र हामी सँगसँगै एकैछिन मजा आयो। यस उत्पादनमा हुने भएपछि, उनी भन्छन् कि नोलविद परिणामहरू अचम्मलाग्दो छन्। सबै कुरा अब उल्टाइएको छ, र ऊ सामान्य हुन्छ। स्तनहरू महत्त्वपूर्ण रूपमा घटाइएका छन्, र ऊ काम गर्न सकिएको छ। लाइबिदो अब उच्च छ। म विश्वास गर्दछु यो सर्वश्रेष्ठ PCT हो जुन तपाईंको टेस्टोस्टेरोन बढावा दिनेछ। "
9. Nolvadex for sale
तपाईं चाहन सक्नुहुन्छ Nolvadex पाउडर खरीद गर्नुहोस् एक पीसीटी ड्रग को रूप मा या बांझपन देखि निपटने को लागि। साथै, तपाईं ठूलो मांसपेशियों को पछि लाग्न सक्छ वा छिटो र सजिलै संग केहि वजन हासिल गर्न चाहन्छ। मुख्य प्रश्न हो जहाँ तपाईं यसलाई पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ?
सबै भन्दा साधारण प्रश्नहरू जुन मानिसहरू सोध्छन्, उनीहरूले नोलभ्याडे पाउडर खरीद गर्न सक्छन्। यसलाई मात्र खरिद गर्नुहोस् तर राम्रो पाउनुहोस् र राम्रो मूल्य हो। विचार गरिरहेको छ कि त्यहाँ थुप्रै अनलाईन वेभसाइटहरू छन् जुन तपाइँले किन्न सक्नुहुनेछ, तपाइँ निश्चित हुन सक्नुहुन्न कि कुन प्रस्तावमा Nolvadex लाई सुरक्षित छ।
तपाईं सही कुरा खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भनेर निश्चित हुन, तपाईं खरीद गर्न सक्नुहुनेछ Nolvadex for sale हामी बाट। यदि तपाईं आफ्नो इरादा पुन: सुचारु गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईले उचित मूल्यमा नोलभ्याडक्स लाई थोकमा पनि खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। राम्रो कुरा यो हो कि हाम्रो नोलविदक्स संग, त्यहाँ देखि पेट पेट या विषाक्तता को सम्भावना छैन। यो वास्तविक Nolvadex हो।
10। नोलवाडक्स महिलाहरु मा बांझपन को उपचार गर्न को लागि
गर्भपात र समस्याको सामना गर्न सशक्त? तिमी एक्लो छैनौं। तथ्याङ्कले देखाउँछ कि विवाहित महिलाहरु को 7% को वरपर दुनियाभरका बांझपनको समस्याहरू छन्। तथापि, यो मतलब छैन कि यदि एक समस्या छ भने, तिनीहरूले कहिल्यै आफ्नो बच्चालाई पक्रन गर्ने मौका पाउनेछैनन्।
एक बाजुकता मा योगदान को मुख्य मुद्दों को एक ovulation समस्याहरु हो। तिनीहरू polycystic अंडाकार सिंड्रोमको कारण हुन सक्छ, जुन हार्मोनल असंतुलन द्वारा विशेषता हो यसैले सामान्य ovulation संग हस्तक्षेप गर्दछ। राम्रो समाचार भनेको मौखिक वा इंजेक्शन दिइएका दबाइहरू हो जुन उनीहरूले कुनै पनि समस्याको सामना गरिरहेका छन् भने एक उत्पादन अण्डाको सहयोग गर्दछ। त्यसकारण तिनीहरू ओभलनको संभावना बढाउँछन्।
यसबाट, कसैले सही समय गर्भवती बनाउन सक्ने गर्भवती हुन सक्छ। एक को Tamoxifen Citrate पाउडर फाइदाहरू यसले प्रभावकारी ढंगले ओभर्युलेसनलाई उत्तेजित गर्दछ। साथै, यदि यो एक उत्पादन गरिरहेको छ भने धेरै अंडाहरू उत्पादन गर्न ओभरहरू उत्प्रेरित गर्छ। यसको फायदा यो हो कि यसको उपयोग महंगा र खतरनाक जस्तो छैन जस्तै गोनडोट्रोपिन (इंजेक्शन योग्य ओल्ल्युल दबाइहरु) को प्रयोग।
क्लोमेड नोलोभ्याक्सको रूपमा एकै कक्षामा आउँछ, र दुवै सामान्यतया गर्भनिरोधी महिलाहरुमा ओल्ल्युमेन्ट विकारहरूको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूले एकैसाथ काम गर्छन् र महिलाहरूको 65-75%% मा ovulation उत्प्रेरित गर्न मद्दत गरेका छन। क्लोमेड, तथापि, साइड इफेक्टरी को अनुहार जस्तै साइड इफेक्ट्स संग आउँछ गर्भनिरोध गर्न सक्षम छैन। अर्कोतर्फ, गर्भाशयमा नोल्भडेक्स साइड इफेक्टहरूमा कुनै रिपोर्टहरू गरिएको छैन।
Tamoxifen: एन्टेस्ट्रोजन को परे, जॉन ए। केलन द्वारा, पेज 1-201
जॉन एफ। किस्लर, ग्रेग ए अन्सेकेक, हपर कोलोन्स, एक्सएनएमएक्स अप्रिल 6, 1999-1
टामोक्सिफेन, डा। टाइटस मार्कस, स्वतन्त्र प्रकाशन, 29thमार्च 2019, 1-18